Griezmann, Reus, Auba iyo Mata – Maxaad ka taqaanaa Siddeed ciyaaryahan oo waa weyn, kuwaasoo ku dhow in xirfaddooda ay ku dhammeystaan iyagoo aan horyaal ku guuleysan? – Gool FM
Griezmann, Reus, Auba iyo Mata – Maxaad ka taqaanaa Siddeed ciyaaryahan oo waa weyn, kuwaasoo ku dhow in xirfaddooda ay ku dhammeystaan iyagoo aan horyaal ku guuleysan?
Haaruun March 17, 2020
(Yurub) 17 Mar 2020. In meesha ugu sarreysa laga gaaro ciyaarta kubadda cagta waa riyada uu leeyahay ciyaaryahan walba, kuwa ugu nasiibka wacan inay meel sare gaaraan waa kuwa ugu badan ee koobab ku guuleystay.
Mararka qaar, dhibaato ma lahan sida adag ee uu ciyaaryahanka u dadaalo, haddii uusan ku guuleysan wax koob maxalli ah ama horyaal, dadaalkiisu wuxuu noqdaa mid aan miro dhal ahayn, dabcan wey jiri kartaa in kooxaha qaar aysan awoodin hanashada koobabka dalkooda iyo ciyaartoy daacadnimo darteed ugu dhammeysta waayahooda si kasto ay koob la’aan u dhacdo.
In dadaalka ciyaartoyda ay noqdaan kuwa aanan guuleysan, in kooxahooda aysan horyaalka qaadin iyo inay daacadnimo darteed ugu biiri waayeen kooxo ay horyaal la qaadi karaan, dhammaan saddexdaasi qodob waxaa marti sooray Steven Gerrard, kaasoo labo jeer ku sigtay in Premier League-ga uu kula guuleysto kooxdii uu kabtanka u ahaa ee Liverpool.
Si kastaba ha ahaatee, ka fariisashadiisa ciyaaraha ayaa timid ka hor sanooyin faro ku tiris ah xilli Reds oo uu hor kacayo Tababare Jurgen Klopp qarka u saaranyihiin inay soo af-meeraan sugitaankii 30 sano jirsaday, hase ahaatee, caabuqa Coronavirus oo dunida ku faafay awgeed, hakad ku meel gaar ah ayaa la geliyay horyaalka.
Sidaas darteed, waxaa jira ciyaartoy badan oo la mid ah halyeyga Liverpool ee Gerrard, kuwaasoo weli aanan madaxooda ka kor marinin koobka horyaalka.
Waxaa ka mid ah xiddigahaas Goolhaye Alisson, Roberto Firmino, Joe Gomez, Adrián, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana, Andrew Robertson, Divock Origi, Joël Matip iyo Trent Alexander-Arnold kuwaasoo hadda ka wada tirsan Reds.
Hase ahaatee, kooxdooda waxaa ku jira ciyaartoy hore horyaallo ugu soo guuleystay iyagoo u ciyaaraya kooxo kale waxaana ka mid ah xiddigahaas Fabinho (Monaco), Virgil van Dijk (Celtic), Georginio Wijnaldum (PSV), Dejan Lovren (Dinamo Zagreb), James Milner (Man City), Naby Keïta, Sadio Mané oo lagu daray Takumi Minamino (dhammaantood Red Bull Salzburg), Mohamed Salah (FC Basel) iyo Xherdan Shaqiri (FC Basel iyo Bayern Munich).
Si kastaba ha ahaatee, sheekada siddeeda ciyaaryahan ee aan idin la wadaageyno waa ay ka duwan tahay tan Liverpool, maadaama siddeeda ciyaaryahan ee sheekadan ay taabaneyso ay yihiin kuwo ugu yaraan 300 kulan oo horyaal ah ciyaaray.
Kooxaha uu u ciyaaray: Real Sociedad, Atletico Madrid, Barcelona
Kulamada horyaallada: 386 kulan
Xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee buuxa, Antione Griezmann waxa uu dhaliyay lix gool kaddib 39 kullan oo uu saftay Real Sociedad, taasoo ku soo guuleysatay horyaalka heerka labaad ee Spain, kaddibna afar xilli ciyaareed ayuu baaqi ku sii ahaa.
Qaab ciyaareed wanaagsan oo uu La Real kooxda lagu naaneyso ku soo bandhigay kaddib, waxaa la soo saxiixatay Atletico Madrid oo beddel kaga dhigeysay xilligaas Diego Costa oo u hayaamay Chelsea kaddib markii uu kula guuleystay horyaalka La Liga 2013-14, hase ahaatee tan iyo ku biiristii laacibka France kooxda Diego Simeone, waxay ku dhammeysteen booska saddexaad saddex jeer oo kala duwan, halka labadii xilli ciyaareed ee u dambeysayna labaad ay ku dhammeysteen.
Ku guuleystaha Koobkii Adduunka ee 2018 ayaa rajeynaya inuu horyaalka La Liga kula guuleysto kooxdiisa Barcelona, inkastoo loollan adag ay kala kulmayaan Real Madrid.
Kooxaha uu matalay: Rot Weiss Ahlen, Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund
Kulamada horyaalka oo uu ciyaaray: 328
Kaddib markii uu ku guuldarreystay inuu ka soo qalin jebiyo kuliyadda Borussia Dortmund, Marco Reus ayaa ku soo laabtay gurigiisa 2012-kii, isagoo u soo ciyaaray kooxda Borussia Monchengladbach.
BVB ayaa labo horyaal oo xiriir ah ku guuleysatay ka hor imaanshahiisa, balse markii Reus uu ku soo biiray Signal Iduna Park, wax horyaal ah kooxdiisa ma aysan qaadin hase ahaatee koobab kale ayay hanatay.
Markii ugu dhoweyd waxay ahayd xilli ciyaareedkii 2018-19 oo ay labo dhibcood ku waayeen hanashada Bundesliga, inkastoo xilli ciyaareedka intiisa badan ay iyagu hooggaanka hayeen.
3- Pierre-Emerick Aubameyang
Kooxaha uu ciyaaray: Saint-Etienne, Borussia Dortmund, Arsenal
Kulamada horyaalka: 373 kulan
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa afartiisii xilli ciyaareed ee ugu horreysay ku qaatay kooxda AC Milan oo xilligaas ahayd koox koobab u tartanta, balse kulanna uma uusan ciyaarin kooxda koowaad illaa uu ugu dambeyn 2011-kii ku biiray kooxda Saint-Etienne.
Intii uu ku sugnaa kooxda Faransiiska ah, Aubameyang ayaa noqday weeraryahan laga cabsado, waxaana 2013 uu ku biiray kooxda Borussia Dortmund, hase ahaatee ma uusan kula guuleysan Bundesliga, hadda oo uu ku suganyahay Arsenal-na, rajada ugu dhow waa xilli ciyaareedka kale.
Kooxaha uu u ciyaaray: Nice, Lyon, Tottenham Hotspur
Kulamada horyaalka: 470 kulan
Kabtanka qaranka France ee Hugo Lloris isaguna waxa uu raadinayaa weli horyaalkiisii ugu horreeyay, inkastoo uu heysto koobka ugu weyn ee uu ciyaaryahan hanto oo ah Koobka Adduunka.
Waxaa si gaar ah u saameyneysa in wax koob ah uusan weli la qaadin Spurs tan iyo imaanshihiisii 2012-kii, tiiyoo ay jirto inuu qandaraas cusub u saxiixay kooxda ka dhisan Magaalada London, kaasoo dhacaya 2022-ka.
Kooxaha uu u ciyaaray: Real Madrid Castilla, Valencia, Chelsea, Manchester United
Kulamada horyaalka: 391 kulan
Waa mid ka mid ah xiddigaha ka soo qalin jebiyay kuliyadda dhallinyarada Real Madrid, balse Mata ma uusan helin fursadda kooxda koowaad, taasoo keentay inuu Valencia ku biiro, isagoo xilli ciyaareedkiisii koowaad kula guuleystay Copa del Rey.
Afar sano oo uu Mestalla ku qaatay kaddib, kubbad sameeyaha Spanish-ka ah waxa uu 2011 ku biiray Chelsea oo uu ku noqday xiddig sare, kaddibna Manchester United, hase ahaatee labada kooxoodba ma uusan kula guuleysan wax horyaal ah.
6- Marek Hamsik
Kooxaha uu u ciyaaray: Slovan Bratislava, Brescia, Napoli, Dalian Yifang
Kulamada horyaalka: 501 kulan
Kubbad sameeyaha reer Slovakia ma uusan raacin waddadii ay qaadeen Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani iyo Gonzalo Higuain oo raadsaday kooxo ay horyaal la qaadi karayn, balse daacadnimadiisa ayaa soo gaarsiisay illaa February 2019, markaasuu ku biiray kooxda Dalian Yifang.
Illaa 12 xilli ciyaareed oo uu ku sugnaa Napoli, waxa uu isku dayay inuu ka caawiyo horyaalkoodii ugu horreeyay tan iyo waayihii Maradona ee Siddeetamaadkii, in booska labaad ay galaan ayaase ahayd meesha ugu dhow.
7- Dimitri Payet
Kooxaha uu matalay: AS Excelsior, Nantes, Saint-Etienne, Lille, Marseille, West Ham
Kulamada horyaalka: 452 kulan
Inkastoo sanadihii ugu dambeeyay uu la imaaday qaab ciyaareed hagaagsan, misena weli kuma uusan guuleysan wax horyaal ah.
Payet ayaa Lille ku biirray 2011 kaddib markii Eden Hazard, Gervinho iyo xiddigo kale ay kooxda ka caawiyeen ku guuleysiga Ligue 1, balse sidii uu filayay ma aysan noqon, maadaama hantida reer Qatar ay PSG gelisay ay miro dhashay, kooxihii kalena ay ku adkaatay inay horyaalka qaadaan.
8- Laurent Koscielny
Kooxaha uu u ciyaaray: Guingamp, Tours, Lorient, Arsenal, Bordeaux
Sanadihii ugu horreeyay xirfaddiisa wuxuu ku qaatay horyaalka heerka labaad ee France, balse Laurent Koscienly ayaa 2009 ku biiray kooxda Lorient ka hor inta uusan xilli ciyaareed kaddib ku biirin Arsenal.
Markii uu saldhigtay Emirates, Koscienly ayaa ku guuleystay labo jeer koobka FA Cup-ka, balse marnaba uma aysan dhowaan Gunners hanashada Premier League-ga, isagoo ugu dambeyn 2019-kii ku laabtay France si uu ugu biiro Bordeaux.
Fursadda ay kooxdan horyaalkeedii ugu horreeyay tan iyo 2009-kii ku hanan karto ayaa aad u yar, iyagoo hadda 13 dhibcood ka dambeeya hooggaamiyaasha horyaalka ee PSG.
Lautaro Martinez oo diyaar u ah inuu wada hadallo la furo Kooxaha Chelsea iyo Man City... (Maxaa helay Barcelona?)
Real Madrid oo qorsheeneysa inay marto wado ay horey u qaaday si ay ula soo saxiixato Jadon Sancho